DavidBridburg စက်တင်ဘာလ 19, 2020 မတ်လ 23, 2021
ဘာကြောင့် Vincent van Gogh ပန်းချီကားများ?
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏အမြတ်ထုတ်မှုများကသင်၏လက်ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်အနုပညာဖန်တီးရန်သင့်အားလှုံ့ဆော်ပါကကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်။ မင်းဘယ်လိုနေလဲဆိုတာငါ့ကိုအသိပေးပါ
ကျွန်တော့်အနုပညာကျောင်းတက်တုန်းက Post Modern Art အနုပညာသီအိုရီကိုလေ့လာခဲ့တယ်။ သင်ကဘာလဲ၊ ရိုးရှင်းစွာအတိတ်ကိုထားနှင့်လက်ရှိလက်ထပ်ထိမ်းမြားအလွန်အသစ်သောအရာတစ်ခုခုဖြစ်လာသည်။
Van Gogh ပြတိုက်အမ်စတာဒမ်နှင့် Rijksmuseum
အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့လူတစ်ယောက်ကောင်းကောင်းစားရမယ်၊ အိမ်ကောင်းကောင်းထားရမယ်၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ရံဖန်ရံခါဒိုင်လူကြီးလုပ်တာ၊ ပိုက်လိုင်းကိုသောက်ပြီးအေးအေးလူလူကော်ဖီသောက်သင့်တယ်။ “ ငါဟာရွေးချယ်သူကစွန့်စားသူမဟုတ်ပေမယ့်ကံကြမ္မာကြောင့်ပဲ”
ဗင်းဆင့်ဗန် Gogh ကိုးကား https://www.vangoghgallery.com/misc/quotes.html
ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သောဗန်ဂိုးဂ်ပန်းချီကားများစွာကိုဗန်ဂေါ့ပြတိုက်အမ်စတာဒမ် (သို့) Rijksmuseum တွင်ထားသည်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကပန်းချီကားတွေကို download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုထာဝရထာဝရကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တရားဝင်ပြတိုက်ဆိုဒ်များ ဗန်ဂိုးပြတိုက်အမ်စတာဒမ် နှင့် အမျိုးသားရေးပြတိုက်.
2006 ခုနှစ်တွင်ငါအနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ စိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်လာပြီး၊ လက်ရာတစ်ခုမှပုံတစ်ခုကိုကွန်ပျူတာများကို အသုံးပြု၍ အခြားလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလက်ရာတစ်ခုထဲသို့ထည့်ပါလေ။ သင်ဤအမှုကိုပြုသောကြည့်ရှုနိုင်သည်။
၂၀၁၀ မှာ Tevis အမည်ရှိအငြိမ်းစားအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဖွဲ့ခဲ့တယ်။ သူကဓာတ်ပုံပညာမှာအားကောင်းတဲ့နောက်ခံရှိတယ်။ ၂၀၁၂ မှာ Photoshop ကိုစလေ့လာခဲ့တယ်။
2014 ခုနှစ်မှာငါထုတ်လုပ်မှုသို့သွားလေ၏။ Tevis ၏လမ်းညွှန်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုကကျွန်ုပ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံရိပ်အရည်အသွေးများအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
အသေးစိတ်ထဲသို့ဆင်း burrow ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်ရလဒ်များကိုကြည့်ချင်တယ်။
ဒေးဗစ် Bridburg မှ Van Gogh Mural II
သင်ဤပုံကိုနှစ်သက်ပါသလား။ ဦး ခေါင်းကတက်သည်။ LOL မင်းတချို့ကဒီကိုကြိုက်ကြလိမ့်မယ်။ ဒီပုံမှာ Vincent van Gogh ပန်းချီကားသုံးလွှာရှိပါတယ်။ လက်ဝဲမှ ၀ င်လာသောအခါရောင်ခြည်များသည်အလွှာတစ်ခုကိုနက်ရှိုင်းစေသည်။ လက်ျာမှလာသောရောင်ခြည်များသည်အလွှာနှစ်ထပ်ကျသည်။
ဒေးဗစ် Bridburg မှ van Gogh Mural III ၏တုန်ခါမှု
ဤသည်အလွန်အစွမ်းထက်လှပသောပုံနှိပ်အရောင်နှင့်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူနာမည်ကြီး Dublin ၏တံခါးပေါက်ကဲ့သို့အသက်ရှင်လျက်လာပါတယ်။
David Bridburg မှဖန်ထည် ၁။
၎င်းသည်ဗန်ဂိုး၏“ အလုပ်မှမွန်းတည့်ချိန်နား” အပေါ်အခြေခံသည်။ ဒီအကြှနျုပျ၏ထုတ်မယုံနိုင်စရာရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမသေးသင်ကပြောသည်လျှင်။ LOL တောက်ပစက္ကူရွေးစရာသည်အမှန်ပင်အံ့သြစရာကောင်းသည်။
ကံမကောင်းစွာငါဗန် Gogh ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမသိခဲ့ပါ ကျွန်ုပ်၏ဖန်တီးမှုများအကြောင်းလူများကိုမရှက်ပါ။ သူဟာအသက်တာ၌ bedeviled သို့မဟုတ်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။
သူရေးထားတာတွေကိုဖတ်ရင်တော့သင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။ ဗင်းဆင့်အလွန်ကောင်းစွာစာခဲ့သည်။ ဗန်ဂိုး၏စာဖတ်ခြင်းသည်စိတ်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောယူဆချက်များစွာကိုစိန်ခေါ်သည်။
“ လူမရှိသူတစ်ယောက်နှင့်အခြားပျင်းရိသူတစ် ဦး အကြားကြီးမားသောခြားနားချက်ရှိသည်။ သူ၏သဘာဝတရား၏အခြေခံကျမှုကြောင့်ပျင်းရိခြင်းနှင့်အကျင့်စာရိတ္တပျက်ခြင်းတို့မှပျင်းရိနေသောတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက၊ ထိုအရာများထဲမှတစ်ခုအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်သွားပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါအခြားပျံ့နှံ့နေသောအခြားတစ်မျိုးမှာသူကိုယ်တိုင်ရှိနေသော်လည်းပျင်းရိနေသောသူ၏လှုပ်ရှားမှုအတွက်အလွန်တောင့်တသောစားသုံးမှုသည်သူ၏လက်များကိုချည်နှောင်ထားသောကြောင့်သူသည်တစ်နေရာရာတွင်ထောင်ကျနေသောကြောင့်သူလိုအပ်သောအရာမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေကသူ့ကိုဒီအဆုံးအထိအတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်လာလို့ပဲ။ ထိုသို့သောသူသည်သူဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုအမြဲမသိတတ်သော်လည်းသူကပင်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုခုအတွက်ကောင်းသည်ဟုပင်အသိစိတ်ဖြင့်ခံစားသည်။ ကျွန်ုပ်၏တည်ရှိမှုသည်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲမဟုတ်ပါ။ ငါအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောလူတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သည်ကိုငါသိ၏! ကျွန်ုပ်မည်သို့အသုံးချနိုင်မည်နည်း၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်အတွင်း၌တစ်ခုခုရှိသော်လည်းဘာဖြစ်နိုင်ပါသနည်း။ သူကအတော်လေးနောက်မကျတော့ဘူး။ မင်းကြိုက်ရင်မင်းကငါ့ကိုယူမယ်။
- ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုး, ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုး၏ပေးစာ
ယခုငါကိရိယာများနှင့်အတူကစားရန်စတင်။ သငျသညျအစဉျအမွဲတစ် ဦး gadget ကိုရ, သူကအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုအံ့, ခြင်းနှင့်အချို့သောအေးမြအသံနှင့်အတူတက်လာ? ဒါမှမဟုတ်အမြင်အသစ်တခုလား။
Van Gogh Almond Blossoms သည်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ သိမ်မွေ့သောပန်းချီကားဖြစ်သည်။
David Bridburg မှ Sphere III van Gogh
ဤသည်သည်ဗန်ဂိုး၏ Cypress ပန်းချီကားတစ်ကားဖြစ်သည်။ ငါပန်းချီကားကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့အသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းမြင်နိုင်တယ်။ ငါနောက်ခံပန်းချီကားအတော်များများအကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဝိဒ်သည် Bridburg အားဖြင့် Sphere7ဗန် Gogh
ကျေးလက်ဒေသ 20 ဗန် Gogh
Vincent van Gogh“ Irises” သည်အနုပညာရှင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အရာနှင့်လုံးဝမတူပါ။ ဗန်ဂိုးသည်သူ့ခေတ်တွင်စူးစမ်းရှာဖွေခဲ့သဖြင့်သူသည်ကွန်ပျူတာအနုပညာကိုလေ့လာလိုသည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။
David Bridburg မှ Inv Blend6van Gogh
“ Roses and Irises” ပန်းချီကားကိုကျွန်တော်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးခဲ့တယ်။ ငါဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းစနစ်များကိုသုံးစဉ်နောက်ခံပန်းချီ၏သက်တမ်းကြာရှည်ခြင်းကြောင့်တစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။
David Bridburg မှ Inv Blend 11 van Gogh
ဒီအတွင်းအရောင်အတွက်အပြောင်းအလဲရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းခုနစ်ခုကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောကြောင့်သင်၏အံ့သြဖွယ်နေရာကိုအလှဆင်ရန်အရောင်ခြယ်မှုတစ်ခုကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းသုံးခုကွဲပြားခြားနားသော collection များကို: Rustic, Blend နှင့် Inv Blend ကိုဖြတ်ပြီးပြန့်နှံ့နေကြသည်။
David Bridburg မှ Inv Blend 15 van Gogh
အောက်တွင် Vincent van Gogh Irises အကြောင်းပိုမိုဖော်ပြထားသည်။ ဤအချိန်တွင်နောက်ခံပန်းချီကားသည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့သျောလညျးကိုသင်မြင်သည်အတိုင်းခေတ်မီပြီးပြည့်စုံသည်။
David Bridburg မှ BW6van Gogh
အဆိုပါ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်စုဆောင်းခြင်း, BW, အမြင်များအတွက်အသစ်တခုစမ်းသပ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်စုဆောင်းထားသောအဖြူရောင်သီးနှံပင်ကိုအနက်ရောင်ဖြင့်တွေ့နိုင်ပါသည်။
ကိရိယာများနှင့်အတူစမ်းသပ်ခြင်းမှ ဦး ဆောင်ခဲ့သည် အလွှာစုဆောင်းခြင်း.
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆေးကုသမှုအတွက်“ Almond Blossoms” သည်ကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အလွန်ကြာရှည်ခံကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ အရောင်များကိုသင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ သင်၏အိမ်တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အသံထွက်အဖြစ်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
David Bridburg မှအလွှာ ၄ van van Gogh ဖြစ်သည်
“ Almond Blossoms” ကိုဆန့်ကျင်သော“ Roses and Iris” ဤရောနှောမှုသည်အစိမ်းရောင်ရှိ Almond Blossoms နှင့်အတူအစ်မအပိုင်းအစဖြစ်သည်။ အနီရောင်၌ဤပွဲလမ်းသဘင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏စာကြည့်တိုက်သို့မဟုတ် living ည့်ခန်းထဲမှအစိမ်းရောင်ပန်းချီကားသည်သစ်သားကိုချီးမွမ်းသည်။
လိမ္မော်ရောင်အနီရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ဘယ်လိုခံစားရသလဲ ကလေးဘဝတုန်းကကျနော့်အမြင်လိမ္မော်ရောင်ဟာကျွန်တော့်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်။ ရေတပ်ဘလူးသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာအနက်ရောင်ပေါ်သို့တက်။ ပုံ၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ဤပုံသည်သေးငယ်။ သေးငယ်။ သေးငယ်။ ကြီးမား။ အစွမ်းထက်သည်။
“ အလုပ်ခွင်မှမွန်းတည့်ချိန်” သည်အချစ်ဖြစ်သည်။ ဒီခေတ်မီဖန်တီးမှုအတွက်အချို့သောအပျြောအပါးရှိခဲ့သည်။
ငါသည်ဤဘလော့ဂ်၌သင်တို့နှင့်ဆက်စပ်သောအဖြစ်ငါအမျိုးအစားရောထွေး။ ခေတ်ပြိုင်အနုပညာလက်ရာများရှိအကြောင်းအရာသည်အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ မင်းခေါင်းကိုကုတ်ခြစ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်ငါဆိုလိုတာကလူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံတူဟာအခုဖြစ်လာပြီ။
ဤအရာကိုသင့်အားပြသနိုင်ရန်ငါ van Gogh နှင့် van van Gogh ပုံနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ သင်တို့သည်လည်းတွေ့နိုင်ပါသည် ခေတ်ပြိုင်စုဆောင်းခြင်း.
ရုပ်ပုံများစုဆောင်းခြင်းသည်ဘာသာရပ်မှအရာဝတ္ထုတစ်ခုသို့၊ ထို့နောက်အနည်းဆုံး icon များသို့ရွေ့သွားသည်။
David Bridburg မှခေတ်ပြိုင်2van Gogh
မင်းသားတစ် ဦး သည် ၀ တ်စားဆင်ယင်ထားသောပလတ်စတစ်ခြုံဖြင့်အရုပ်တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ဒါဝိဒ်သည် Bridburg နေဖြင့်ခေတ်ပြိုင်5Hanneman
Michelangelo ဘယ်လိုထင်မလဲ။ သူ့မျက်လုံးကဒီအိုင်ကွန်ဆိုတာဘာကိုနားမလည်နိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒါဝိဒ်၏ silhouette ကိုရိပ်မိနေသည်။ အတွေးအခေါ်များ၏ရိုးရိုးလှုပ်ရှားမှုသည်သင်နှင့်ထိတွေ့ရန်ဖြစ်သည်။
David Bridburg မှခေတ်ပြိုင် 12 Michelangelo
ခေတ်ပြိုင်အတွေးအခေါ်လောကတစ်ခုမှသင်အနုပညာနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်တစ်ခုကိုစတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ဒါကအစွန်းရောက်ရဲ့အဓိပ္ပါယ်လား။ ဟားဟား
သင်ဒီမှာပုံစံတစ်ခုမြင်နေရပေလိမ့်မည်။ ငါအလုပ်တစ်ခုကိုစတိုင်သို့အခြေချဘယ်တော့မှမ။ ဤသည်မှာအနုပညာရှင်များအတွက်မညီကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ဟာအနုပညာအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှာတစ်မူထူးခြားတဲ့စတိုင်ကိုမရွေးတဲ့အတွက်များပြားလှသောတွန်းအားတွေရခဲ့တယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့မင်းကိုဖျော်ဖြေရေးလို့မင်းထင်တယ် ဒုတိယဒစ်ဂျစ်တယ်ကိရိယာတွေကိုသုံးပြီးငါ့ကိုပန်းချီဆရာတွေမရှိဘူး။ တတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်သည်ပြခန်းပိုင်ရှင်မှသတ်မှတ်ထားသောပြခန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အဘယ်အရာကိုရောင်းချဘာဆိုလိုတာကသင်တို့နှင့်ငါ့ကြားဆက်ဆံရေးကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုဘယ်သူကမှဒီပုံစံကိုမဖော်ထုတ်ချင်ဘူး၊ စတိုင်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်စိတ်ကူးတစ်ခုတည်းကိုပဲငါထားမှာမဟုတ်ဘူး။
Post Post အနုပညာ
ဒါကဖြစ်ပါသည် အမေရိကန်အသိပညာဆိုင်ရာစုဆောင်းခြင်းနံရံကပ်ပုံပြင်များ ဖော်ပြချက်:
ပိုစ့်ပိုစ့်၏အတွေးကမ္ဘာကြီးနှင့်အမေရိကန်အိပ်မက်များကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၉ ပုံ ၄ ပေအထိပုံနှိပ်နိုင်သည်။ သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကြီးမြတ်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသည်။
ဒေးဗစ် Bridburg မှအမေရိကန်ပညာရပ်ဆိုင်ရာစုဆောင်းခြင်းပန်းချီကားများ
Pop Art သည်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ Post Pop Art သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုများပိုမိုရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ပတ်သက်သည်။ ပန်းများ၊ အနီရောင်၊ လိမ္မော်နှင့်အဝါရောင်များကိုစတင်မိတ်ဆက်သည်။ အစိမ်းရောင်၏သဘာဝကမ္ဘာမှအနုပညာလက်ရာများကိုရွှေ့ခြင်း။
အမေရိကန်ဉာဏ်ရည်6သည် David Bridburg မှတွေ့ရှိသည်
နယူးယောက်မြို့ရှိအမေရိကန်ဥယျာဉ်၌ American Intelligent6ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဤနံရံတွင်စွမ်းအားနှင့်ကြော့ရှင်းမှုရှိပြီးဖော်ပြချက်တစ်ခုပါရှိသည်။
အမေရိကန်ဉာဏ်ရည်7သည် David Bridburg မှတွေ့ရှိသည်
American Intelligence7သည်ညီမလေးဖြစ်သည်။ van Gogh Almond Blossoms ၏ထူးခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာသည်ယဉ်ကျေးမှုအခြေအနေကိုမေးခွန်းထုတ်သည်။ ဤရွေ့ကားအကျင့်ကိုကျင့်အစွမ်းထက်နိုင်ငံရေးဖြစ်ကြသည်။ နက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းအားဖြင့်၊
"ဒီဇာတ်ကြောင်းအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှာဖွေရန်ကြိုးစားနေသူတွေကိုတရားစွဲဆိုလိမ့်မည် ကိုယ်ကျင့်တရားကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသူများကိုနှင်ထုတ်လိမ့်မည်။ မြေကွက်ကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကွက်ကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကွက်ကွက်မြင်စရာရှိသည်၊ ကြိုးစားရန်ကြိုးပမ်းသူများကိုသေနတ်ဖြင့်ပစ်မည်။
- Mark Twain၊ Huck ဖင်လန်၏ Adventures ကို
နောက်ထပ်အမေရိကန်ပန်းဥာဏ်ရည်ရှိပန်းရောင်နှင့်စိမ်း ၁၁။ ဤသည်သည်သင်အတွက်အလွန်ကွဲပြားသော ဦး တည်ချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏တောက်ပသောနေသာကျယ်ဝန်းသည့် living ည့်ခန်းတွင်ဖဲကြိုးတစ်ခုရှိသည်။ ဗန်ဂိုး၏“ ဗာဒံပန်းပွင့်များ” သည်အခြေခံဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ဉာဏ်ရည် 11 သည် David Bridburg မှတွေ့ရှိသည်
လွန်ခဲ့သော ၁၃၅ နှစ်ကပြင်သစ်လယ်ယာမြေများကိုသင်အောက်တွင်ကြည့်ပါ။ နောက်ခံပန်းချီကားကိုကျွန်ုပ်အား ဦး စွာပြုပြင်ခဲ့ပြီး၊ အရင်အလုပ်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ စိမ်းလန်းသောမိုးကောင်းကင်နှင့်ပိုမိုကြွယ်ဝသောအဝါရောင်ရွှေတို့သည်ကျွန်ုပ်၏အပြောင်းအလဲများဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ဉာဏ်ရည် 13 သည် David Bridburg မှတွေ့ရှိသည်
အဆိုပါ နိုင်ငံရေးအ Scrog စုဆောင်းခြင်း ခေတ်သစ်အနုပညာဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ Postmodernism ရဲ့ထီးအောက်မှာရှိတယ်။
“ scrog” ဆိုတာဘာလဲ။ တစ် ဦး က scrog ကြီးထွားလာဆေးခြောက်အပင်ကျော်သတ္တုဝါယာကြိုးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အပင်၏ဘူးသီးများကိုအပင်များပိုမိုကြီးထွားလာစေရန်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသို့ဆွဲငင်ထားသည်။
နိုင်ငံရေးကိစ္စအဖြစ်ယူ, ဆေးခြောက်ဒီမှာနှင့်ယခုအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရာဇ ၀ တ်မှုများအတွက်လက်ဝဲ ၀ င်သူများကိုထောင်ချနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်အကောင်းဆုံးအခွန်ငွေပေးဆောင်ရသောအခွန်အလဟ is ဖြစ်သည်။ အဆိုးဆုံးမှာလူများကိုပိတ်ထားခြင်းသည်မလိုအပ်သောမိသားစုများစွာကိုထိခိုက်စေသည်။ JMO ဒီအရေးအသား၏အမှုအရာပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။
ခေါင်းစဉ်များ "လတ်တလော x" အဖြစ် run ။ မကြာသေးမီကခေတ်သစ်များအတွက်ပြောရလျှင်။ “ မကြာသေးမီ” သည်အနုပညာရှင်များစွာက ad nauseum ကိုသုံးသော“ Untitled” အတွက်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါ၏အ collection များကိုငါနည်းနည်းကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ထွက်ဖလှယ်ခေါင်းစဉ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပါ။
ဒီခေတ်မီရေးရာစုဆောင်းမှု Postmodernism ကိုဘာလုပ်ပေးသလဲဟုသင်မေးနေပါသလား။ အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်၏ရောစပ်။
ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုး၏လယ်ယာမြေများကိုဗြိတိသျှပြတိုက်၌မိုးမျှော်တိုက်၌ထားရှိသည်။ စုဆောင်းခြင်းတွင်ရက်စက်စွာခက်ခဲသည့်နိုင်ငံရေးဖော်ပြချက်အချို့ကိုသင့်အားအတွေးအခေါ်ဖြစ်စေသည်ဟုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ထိုအခါသင်သည်အလွန်လှပသောအနုပညာလက်ရာများတွေ့လိမ့်မည်။
David Bridburg မှ ၂၄ ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်
အောက်ပုံသည် van Gogh မှဆင်းသက်လာသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။ ပုံသည် Vincent van Gogh မှဆင်းသက်လာသောပုံရိပ်ကိုရရှိစေသည်။ နောက်လာမယ့်နှစ်ခုကသင်မြင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။
အထက်ပါအကြောင်းအရာကိုသင်ကြည့်ရှုသောအခါ tonal အရည်အသွေးကိုသင်တွေ့ပါသလား။ ခေတ်သစ် Post အနုပညာရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အရောင်တောက်တောက်ဖြစ်သည်။ Postmodernism တွင်အရောင်သီအိုရီမရှိပါ။ ငါပုံသို့ရုပ်ပုံသွားအရောင်သီအိုရီအနည်းငယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ tonal အရည်အသွေးကိုငါ့ထံသို့အရေးပါ။
ငါ၏အမှုများစွာကိုအတွက်ငါတစ် ဦး ဖွဲ့စည်းမှု၏ဖွဲ့စည်းပုံထပ်လောင်း။ ဒါကသူတို့အားအခါသမယတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်မှာသင်မှတ်ချက်ပေးရင်ငါအရမ်းပျော်မှာပဲ။ ကျွန်ုပ်၏စုဆောင်းသူများနှင့်အမြဲတမ်းထိတွေ့ဆက်ဆံပါကသင်၏အကြံအစည်ကိုကျွန်ုပ်သိချင်ပါသည်။
ဤသည်မှာအလွန်တောက်ပသောပုံဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာပါ။ ပန်းချီဆရာ Vincent ကဒီဂျစ်တယ်ကိရိယာများကိုသုံးမလား။ Vincent ကိစ္စ၏အဖြစ်အပျက်သည်အမြဲတမ်းအသက်ရှင်ခဲ့သောအတိုင်းအနုပညာရှင်တစ် ဦး အနေနှင့်လည်းစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားထူးခြားသောခေတ်မီဖြစ်ကြသည်။ ငါ့ပန်းချီကားတွေကိုကျွန်မအနားမယူခဲ့ဘူး။ ဗေဒပုံများသည် van Gogh ၏ပုံများမဟုတ်ပါ။ ရလဒ်တွေကတကယ်ပဲငါ့ကိုယ်ပိုင်ပါ။ အနုပညာ၌ဤယူရန်အလွန်ရဲရင့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်သူအနေဖြင့်မင်းအတွက်ချပေးခဲ့သောအရာများသည်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖျော်ဖြေမှုဖြစ်သည်။ ရှုပ်ထွေးမှုတွေကအများကြီးနက်ရှိုင်းတယ်ဆိုတာကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။ Postmodernism သည်ကွန်ပျူတာအနုပညာကိုသူ့ဘာသာမတီထွင်ခင်ကသီဆိုခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏စိတ်ကူးများနှင့် applications များအလွန်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
မင်းကိုတောင်းပန်ပါတယ် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့လူနေမှုဘ ၀ ရပ်တည်ဖို့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရပါတယ်။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်ချိုကိုထုတ်ဖော်ခြင်းသည်ရိုးသားစွာကြားရသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အနုပညာလက်ရာတစ်ခုကိုမင်းတွေ့ရင်မင်းကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ် ကျေးဇူးပြု၍ ငါ့ကိုဝယ်ပါ
ကျွန်ုပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဓာတ်ပုံအရောင်းစာမျက်နှာကိုကြည့်ရန် (သင်ထိပ်ရှိအဖုံးပုံနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ) ကျွန်ုပ်စိတ်ကြိုက်ပုံရိပ်များကိုနှိပ်ပါ။
မေးခွန်းမေးခွန်း - Vincent van Gogh ၏အနုပညာလက်ရာကိုခေတ်မီအောင်လုပ်ခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်လား။ ပုံများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုသောအခါ Vincent ၏အနုပညာလက်ရာကိုခေတ်မီအောင်လုပ်ရုံသာမကကျွန်ုပ်ကျော်လွန်သွားသည်ကိုသင်မြင်လိမ့်မည်